न पाल्न सकिन्छ न गाड्न सकिन्छ | पैसाको कुरा
न पाल्न सकिन्छ न गाड्न सकिन्छ
पैसाको कुरा बिहिबार, चैत्र २७, २०७६
विराटनगर । झापा दमकका माधब पराजुलीका खोरमा २० हजार अण्डा पार्ने कुखुरा छन् ।
ती कुखुराले दिनकै १ लाख १८ हजार रुपैयाँको चारो खान्छन् ।
उनकै खोरमा ८ हजार व्वाइलर कुखुरा (मासुको प्रयोजन ) बेच्न ठिक्क भएका छन् । ती कुखुराले दिनको ५० हजार रुपैयाँ हाराहारीको दाना दिनकै खान्छन् । तर कोरोना भाइरसको संक्रमण माछा तथा मासुबाट फैलने भन्दै हल्ला फिजिँएपछि उनको खोरमा उत्पादन भएको अण्डा बिक्न छाडेको छ ।
२२ सय रुपैयाँ सम्ममा कार्टुनको अण्डा बेच्दै आएका पराजुलीलाई भाउ घटेरै भएपनि बेच्न पाँउदा सम्म ठिकै छ भन्ने लागेको तर अहिले भने उनी आपतमा छन् ।
बेच्न ठिक्क भएका खोरका व्वाइलर कुखुरा लैजान कसैले मान्दैनन् । अण्डा पनि विक्दैन । उल्टो संक्रमण फैलने भन्दै गाँउलेले खोर खालि गर्न दवाव दिएपछि उनी के गर्ने के नगर्ने निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।
पराजुली भन्छन् “दिनकै लाखौ रुपैयाँको चारो खुवाएर पाल्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन आफैले पालेर हुर्काएका कुखुरा खाल्डो खनेर पुर्न पनि मनले मान्दैन ।”
यो संकटको घडीमा कसलाई के भनौ ?गरौ के गरौ ? छिमेकीको त्रास पनि ठिकै हो । १० बर्षदेखि कुखुरा पाल्दै आएका पराजुली यो संकट कहिले सकिएला भन्ने अन्यौलले केहि सोच्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताँउछन् ।
मोरंगको बुढीगंगा गाँउपालिका टंकिका किसान राजेन्द्र थापाको खोरमा ४ हजार कुखुराले अण्डा पारिरहेका छन् । तर उनको फर्मको अण्डा बिक्न छाडेको ठ्याक्कै एक साता भयो । उनी पनि चारो खुवाएर कुखुरा हुर्काउन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
कहिले सम्म हो ? कसरी चारो खुवाएर पाल्ने ? यो अन्यौलले कुखुरा पालक किसाना र व्यबसायी सारै मारमा परे । उनी भन्छन्,“अन्यौल एस्तो भयो की के गर्ने के नगर्ने ? कसलाई भन्ने ?
प्रदेश १ मा कोरोना भाइरस संक्रमणको त्राससँंगै पोल्ट्री व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।
शहरहरु लक डाउन हुन थालेपछि माछा तथा मासु पसल पनि कतिपय शहरमा बन्द हुने भएका छन् । बन्द नहुँदा पनि ८० प्रतिसत सम्मले बिक्री घटेको थियो ।
कुखुराको मासु बेच्दै आएका विराटनगरका अर्जुन कट्टुवाल पसल बन्द गरेको बताँउछन् । बिक्री नै नभएपछि खोल्नुको पनि अर्थ छैन । उनले कोरोनाको त्रास बढेसँगै मासु व्यबसाय चौपट भएको बताए ।
पुर्वाञ्चल पोल्ट्री व्यबसायी संघका अनुसार प्रदेश १ मा ४ हजार साना तथा ठूला किसानले कुखुरा पाल्ने गर्छन् । दिनको ३ लाख दाना अण्डा उत्पादन हुन्छ । प्रदेश एकमा कुखुराको मासु मात्रै हप्ताको ३० लाख केजी उत्पादन हुँर्दै आएको संघको तथ्यांक छ ।
मासुको बिक्री घट्नुको कारण होटल व्यवसायमा आएको मन्दी पनि एक हो । मासुको सबैभन्दा धेरै खपत हुने होटल रेष्टुरेन्टहरु बन्द प्राय छन् । त्यसको सबैभन्दा धेरै असर कुखुरा व्यवसायमा कुखुराको दाना चल्ला र मासु बेच्दै आएका नवराज पोखरेल बताँउछन् ।
कुखुराको मासु मात्रै होइन अण्डाको अवस्था पनि उस्तै छ । सुनसरी मोरंग र झापामा व्यबसायीक रुपमा ४ सय भन्दा बढिले अण्डा पाल्ने कुखुरा (लेयर्स )पाल्दै आएका छन् ।
कोरोना संक्रमणको त्रास र हल्लाका कारण खोरमा अण्डा दिदै गरेका कुखुरा गाड्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल अण्डा उत्पादक संघ सुनसरीका अध्यक्ष दुर्योधन निरौलाले बताए ।
केन्द्रले के गर्छ त्यो हेरेर बसेका छौ । किसान साथीहरु के गरौ भनेर फोन गरिरहँनु हुन्छ यसो गरौ भनेर कसैले भन्न सक्दैन ।